[VIDEO] Anwar: Apabila Rakyat Bangkit, Firaun Pun Boleh Tumbang
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အငြိမ်းစား သံအမတ်ကြီး တစ်ဦး၏ မွတ်စလင်များ အပေါ် မှားယွင်းနေသော ထင်မြင်ချက်များအား ဖြေရှင်းချက်
မွတ်စိုးရိမ်ဆရာတော် အလဇ္ဇီရဟန်းဝီရသူ အမြင်မှန်ရပြီး ဆင်ခြင်နိုင်ပါစေသောဝ်
“တရားသစ်သို့ တမ်းခြင်း” (ကဗျာ)
BBC's Latest On Sabah Situation
DVB’s Bigot Reporter Inciting Racism
Watch This Video - They Are In Bad Need Of A Home
ကံချွန်ရဲ့ အလေးအနက် စဉ်းစား နားလည် လိုက်နာရမယ့် စကားအဓိပ္ပာယ်
SOB ဝီရသူ (နှင့်) ကုလားကြီးမုန့်ဟင်းခါး
Kebangkitan rakyat yang menyeluruh mampu menumbangkan sesiapa jua sekalipun Firaun, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim.
"Mesir dikongkong Firaun ribuan tahun. Tapi bila rakyat bangkit, Firaun boleh tumbang. Apatah lagi, firaun kecil kalau ada," katanya, sinis dan disambut sorakan.
Beliau juga percaya, perbuatan pencacai Umno yang mengamal taktik memfitnah pemimpin Pakatan Rakyat, tidak akan membawa kejayaan.
"Kerja fitnah saja Umno, dia orang Melayu-Islam tapi tidak peduli langsung apa yang hak dan apa yang batil.
"Dia solat, pergi umrah. Tapi balik, fitnah orang. Apa jenis manusia? Keadaan sudah berubah, orang boleh fikir. Bagi wang (BRIM), ambil tapi malam dengar ceramah kita," katanya.
Myanmar Muslim Net shared မမလ ဌာနချုပ်'s status.
Posted: 02 Mar 2013 05:46 AM PST
မွတ်စိုးရိမ် ဆရာတော် ၀ီသူသို့ သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်
ရတနာသုံးပါးတွင် သံဃာဟူသည် တစ်ပါးအပါအ၀င်ဖြစ်ပါသည်။ ရဟန်းသံဃာဟူသည် ဗုဒ္ဓ၏ သားတော်များ ဖြစ်ကြလေရာ လေးစားကြည်ညိုဖွယ်အတိ ပြည့်စုံပါ၏။
သို့ရာတွင် ယခုအခါ ခန္ဓာကိုယ်ကို သင်္ကန်းဆီးထားသော်လည်း စိတ်နှလုံးကိုကား သင်္ကန်းမဆီးသော ရဟန်းတု၊ သံဃာယောင်များကို ပေါ်ပေါ်ထင်ထင် တွေ့မြင်လာနေရပါသည်။
ပိုဆိုးသည့်အချက်မှာ ရုပ်ခန္ဓာသင်္ကန်းအရည်ခြုံတို့မှာ သာမာန်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ကောင်းတစ်ယောက်ပင် မလုပ်ဝံ့သော အမှုကြီးများကို သိက္ခာမဲ့ခြင်းတွင် အရှက်မရှိခြင်းဖြင့် အားဖြည့်ကာ ပြုလုပ်နေကြပြီး၊ သာပိုဆိုးသည့် အချက်ကား အသိတရားခေါင်းပါး နုံချာ၍ ဆင်ခြင်တုံအရာတွင် လူစဉ် မမီသော လူတချို့ကပါ ထိုရဟန်းတု သံဃာယောင်များကို လူမိုက်အားပေးလုပ်ကာ ဆည်းကပ်ကိုးကွယ်လျက် ရှိနေကြ ခြင်းပင် ဖြစ်ပါတော့သည်။
ဤဖြစ်စဉ်ဆိုးကြီးသာ ဆက်လက်အဓွန့်ရှည် တည်တံ့နေမည်ဆိုပါက ဗုဒ္ဓသာသနာတော်၏ နေ၀င်ချိန်သည်လည်း ရောက်လာပါတော့မည်။
ရဟန်းဟူသည် သာသနာ၏ အင်အားတစ်ရပ်ဆိုလည်းဟုတ်ပါ၏။ အလှတရားလည်း မည်ပါ၏။ ခံတပ်တော် ဟုလည်း ဆိုနိုင်ပါ၏။ သို့ရာတွင် သံဃာတု ရဟန်းယောင်မှာကား သာသနာ၏ လောက်ကောင်ဟုသာ ဆိုရပါမည်။ မစိုးရိမ်တိုက်သစ်ဆရာတော်ဟု ဆိုင်းဘုတ်တင်ထားသောဝီရသူသည် အလဇ္ဇီရဟန်း(အကျင့်ပျက်ရဟန်း) တစ်ဦးသာ ဖြစ်သည့်အတွက် ဗုဒ္ဓသာသနာကို "ရွှေရောင်အဆင်းလှစေသူမဟုတ်ဘဲ" ၊ "မစင်ယောင် ၀င်းပစေသူ" လောက်ကောင် တစ်ဦးသာဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာ လောက်ကောင်ဟူသည် မစင်မှာသာ ပျော်မွေ့တတ်သော သဘောသဘာဝ ရှိသောကြောင့်တည်း။
မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ သာသနာတော်ကို ယုံကြည်လက်ခံသူ သာမာန်ဗုဒ္ဓသာသနာဝင်တစ်ဦးသည် ကံ(၅)ပါးကို လုံခြုံအောင် ဆောက်တည်ရပြီး၊ ထိုအထဲတွင် မုသာဝါဒဟူသော မဟုတ်မမှန် ပြောဆိုခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ကြရပေရာ၊ ၀ီရသူ အလဇ္ဇီရဟန်းသည် အခြားအယူဝါဒများအပေါ် လုပ်ကြံပြောဆိုရေးသားလေ့ရှိရာ၊ မုသာဝါဒကံကိုပင် လုံခြုံအောင် ဆောက်တည်နိုင်စွမ်း မရှိသူဖြစ်၏။ " ဗလီတွေထဲမှာ မြေအောက်ခန်းတွေ၊ ကျင်းတွေ၊ စစ်စခန်းတစ်ခုလို ဆောက်လုပ်နေတဲ့ ဗလီတွေ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အများကြီးရှိတယ်" လို့ ဆင်ခြင်ဥာဏ်မဲ့စွာ ယိုးစွတ်ပါ၏။
ဗုဒ္ဓသာသနာတွင် မဂ္ဂ(၈)ပါးသည် သစ္စာတရား(၄)ပါးကို သိမြင်နိုင်စေသော အကျင့်မြတ်ဖြစ်သဖြင့် အနှစ်ချုပ် တရားဟုပင် ဆိုနိုင်ပါသည်။ ၀ီရသူသည် သမ္မာဝါစာ မှန်သောစကားကို မဆိုခြင်း၊ သမ္မာဝါယမ မှန်သောလုံ့လစိုက်ထုတ်မှု မရှိခြင်း (ရဟန်းဟူသည် ရဟန်းနှင့် လျှော်ညီသော လုံ့လစိုက်ထုက်မှု မလွဲမသွေရှိရပါမည်။ ရဟန်းတို့ ကျင့်အပ်သော အမှုကိစ္စတို့၌ မွေ့လျော်မှုမရှိဘဲ ၊ လူမိုက်ဆန်ဆန်၊ လူရမ်းကားဆန်ဆန် ပြုလုပ်နေခြင်းသည် သမ္မာဝါယမ မရှိရာ၊ သမ္မာသတိ မရှိရာ၊ သမ္မာကမန္တ မရှိရာ၊ သမ္မာသင်္ကပ္ပ မရှိရာ ရောက်သဖြင့် မဂ္ဂ(၈)ပါးနှင့် ၀ီရသူသည် ပြဒါးတစ်လမ်း၊ သံတစ်လမ်း ဖြစ်နေပါသည်။ )
ဗုဒ္ဓ၏ ကမ္ဘာကျော်တရားဖြစ်သော ကာလမရွာသားတို့အား ဟောကြားသော တရားတော်တွင် -
"ကြားယုံမျှ ဖြင့်လည်းကောင်း၊ အစဉ်အလာရှိပြီးသားဟု ဆိုလျှင်လည်းကောင်း၊ ကျမ်းဂန်ထဲမှာ ပါတယ်ဟုဆိုရုံဖြင့် လည်းကောင်း …………တထစ်ချ မမှတ်ယူလေနဲ့ဦး" ဟု ဆုံးမဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်။ "အမျိုးပျောက်မှာ စိုးကြောက်စရာ"၊ "ကိုယ့်တော့် ကရုဏာ" (နှစ်အုပ်စလုံးမှာ ဆိုလိုရင်း အကြောင်းမှာ ဆင်တူသည် ဖြစ်ရာ မသာနှင့်အသုဘ အမည်နှစ်ခုဖြစ်သော်လည်း တစ်ခုတည်းသာ ဖြစ်သည်) စာအုပ်လောက်သာ ဖတ်ဖူးဟန်ရှိသော ၀ီရသူ၏ ဘ၀သည်ကား
ဗုဒ္ဓဟောကြား မြတ်တရားအရကြည့်ပါသော် သနားစရာကောင်းလွန်းလှပါသည်။
"မာပိဋ္ဋက သမ္ပဒါနေန မာဂ ဏှိဌ"
"ပိဋ္ဋကတ် ကျမ်းကြီးတွေမှာ ပါပေသော်လည်း တထစ်ချ မယူဆနဲ့ဦး" (ကောသမုတ္တိသုတ်)
ဒုစရိုက် မနောကံသုံးပါးတွင် အဘိဇ္ဈာ ဟူသည် သူတစ်ပါးဟာအား "ငါ့ဟာဖြစ်လျှင် ကောင်းလေစွ"ဟု စိတ်ထားကြံစည်ခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည် ။ အခြားအယူဝါဒများ ကောင်းစားနေသည်ကို ဒင်းတို့အစား ငါ့ဟာသာ ကောင်းစားလျှင် ကောင်းလေစွဟု အဘိဇ္ဈာ တရားပွားမျာနေသူ ၀ီရသူသည် မနောဒုစရိုက်ကံကို အချိန်ပြည့်ကျူးလွန်နေသော အပယ် လားမည့် အလဇ္ဇီအကျင့်ပျက် ရဟန်းတစ်ဦးသာ ဖြစ်ပေသည်။
ရန်သူမျိုး(၅)ပါးတွင် " အမွေခံ သားဆိုး၊ သမီးဆိုး "သည်လည်း တစ်ပါးအပါအ၀င်ဖြစ်ရာ "ဗုဒ္ဓ၏သား" ဟု နာမည်ကောင်းယူထားသော ၀ီရသူနှင့် သူ့လို ရဟန်းတု သံဃာယောင်တို့သည် ဗုဒ္ဓ၏ သားဆိုး၊ သားမိုက်များသာ ဖြစ်ကြရာ ဗုဒ္ဓသာသနာအတွက် ရန်သူများသာ ဖြစ်ကြပါတော့သည်။
"ချစ်သား အာနန္ဒာ၊ ငါဘုရားဟောကြားထားသော ဓမ္မ၀ိနယ ခေါ် သုတ်၊၀ိနည်း၊ အဘိဓမ္မာတရားတော်သည် ငါဘုရား ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူသောအခါ အသင်တို့၏ ဆရာဖြစ်သည်" ဟု ဗုဒ္ဓအဟောရှိတော်မူထားလေသည်။
ရဟန်းသံဃာများအတွက် ပါတိမောက်လာ သိက္ခာပုဒ်(၂၂၇)ပါး ရှိသည့်အနက် ကျူးလွန်မိလျှင် ပြန်ကုစား၍ မရသော " ပါရာဇိက သိက္ခာပုဒ်"(၄)ပါးမှာ
၀ီရသူသည် အမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်နှင့် အမျိုးသားရေးအားမာန်တို့ကို ကိုယ်စားပြုထားသည့် "ခွပ်ဒေါင်း" ကိုလည်း စော်ကားသည့် အမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ် ကင်းမဲ့ကာ အမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်ရှိချင်ယောင်ဆောင်နေသူ တစ်ဦးသာ ဖြစ်၍ သူ့၏လုပ်ရပ်များကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာရော မြန်မာလူမျိုးပါ သိက္ခာကျစရာသာ ဖြစ်ပါသည်။ NLDကို တိုက်ခိုက်ချင်၍ "ခွပ်ဒေါင်း"ကို "မွတ်ဒေါင်း" ဖြစ်သွားပြီဟု ၀ီရသူက ခနဲ့ပြောဆိုပါသည်။ တကယ်ပြောသင့်သည့်အမည်မှာ ခွပ်ဒေါင်းကို မွတ်ဒေါင်းဟု ပြောမည့်အစား သူ့ကိုသူသာ "မွတ်စိုးရိမ်ဆရာတော်" ဟု ပြောင်းသင့်ပါသည်။
"သူတစ်ပါးတို့၏ မလျှော်သော အပြစ်အနာအဆာတို့က်ို မကြည့်ရှုရာ၊ သူတစ်ပါးတို့၏ ကောင်းမှု၊မကောင်းမှု ပြုမပြုကို မကြည့်ရှုရာ၊ မိမိ၏ ကောင်းမှု မကောင်းမှု ပြုမပြုကိုသာလျှင် ကြည့်ရှုရာ၏ " (ဓမ္မပဒ – ၅၀)
" ခေါင်းတုံးကာမျှဖြင့် ရဟန်းမည်သည်မဖြစ်၊ သီလအကျင့် ဓုတင်အကျင့်လည်းမရှိသော ချွတ်ယွင်းသောစကားကိုလည်း ပြောတတ်သော၊ လိုချင်မက်မောမှုနှင့် ပြည့်စုံသော သူသည် အဘယ်မှာ ရဟန်းဟုတ်နိုင်ပါအံ့နည်း။ " (ဓမ္မပဒ -၂၆၄)
"သူတစ်ပါးတို့ထံ တောင်းစားကာမျှဖြင့် ရဟန်းမည်သည် မဖြစ်၊ တရားနှင့်မညီညွှတ်သော အကျင့်ကိုယူ၍ ကျင့်ကာမျှဖြင့် ရဟန်းမည်သည် မဖြစ်"။ (ဓမ္မပဒ -၂၆၆)
" အကြင်သူသည် မြတ်သောအကျင့်ရှိသူဖြစ်၍ ကောင်းမှု၊ မကောင်းမှုကို ပယ်နုတ်လျှက် ခန္ဓာ(၅)ပါးဟူသော လောကကို ဥာဏ်ဖြင့် ကျင့်၏။ ထိုသူကို ရဟန်းဟု ဆိုအပ်၏" (ဓမ္မပဒ – ၂၆၇)
" မကောင်းမှု၌ စိတ်သည် မွေ့လျော်တတ်၍ ကောင်းမှုပြုသောအခါ၌ နုံ့နှေးတတ်ရကား မကောင်းမှုမှ စိတ်ကိုတားမြစ်၍ ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ကို လျင်မြန်စောစွာ ပြုလုပ်ရာ၏" (ဓမ္မပဒ- ၁၁၆)
Posted: 02 Mar 2013 05:34 AM PST
M-Media "တရားသစ်သို့ တမ်းခြင်း" (ကဗျာ- M-Media Blog ကဏ္ဍ)
မတ်လ ၁၊ ၂၀၁၃ အိမ်ဝေးသူ (KZ)
သောက်တလွဲ ဖြစ်နေတဲ့ ခေတ်ကြီးမှာ
လူဖြစ်လာတာ ငါတို့ ပေါ့ကွယ်…..။။။
လူကို လူလို မြင်ချင်ပေမယ့်
လူကို လူလို မမြင်တတ်တဲ့…
လူကို လူလို မစာနာတတ်တဲ့…
လူကို လူလို မထောက်ထားတတ်တဲ့…
သူတို့ တတွေက စင်ပေါ်တက်
လူထုကို နံပါတ်တုတ်နဲ့ ဘယ်လို ထိန်းသိမ်းရကြောင်းတရား
သံဃာတော်ကို မီးလောင်ဗုံးနဲ့ ဘယ်လို ပူဇော်ပသ,ရကြောင်းတရား
ကုလားကို ဖိပြီး တရုတ်ကို ဘယ်လို အဖေခေါ်ရကြောင်းတရား
ဟောလည်း ဟောနိုင်သေးတဲ့ တရားတွေ….
သောက်ရေးမပါတာတွေက သောက်ရေးတွေ ပါလာရင်း
တကယ့်မေတ္တာရှင်တွေက တိရိစ္ဆာန်တွေသတ်လို့ သေ
သစ္စာ တစ်ပြားသားမှ မရှိတဲ့သူတွေ…
သာသနာကို ထမင်းစားရေသောက် အရေခြုံသူတွေက
တကယ့်..မေတ္တာရှင်ကြီးတွေ လုံးလုံးကို ဖြစ်လို့ 
(မစူးစမ်းမဆင်ခြင်သော တရား) ကို သယ်ဆောင်လာသူ
ပုံပြင်ထဲက ယုန်သူငယ်လို အဖြစ်မျိုး ငါတို့ တတွေ မဖြစ်ကြခင်
ကေသရာဇာ လူသား အမြန်ဆုံး လာခဲ့တော့ကွယ်…..။။။
ဖွင့်ဆိုချက်…။။။ လောကပါလတရားဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာပြည်တွင် ပျောက်ကွယ်လုမတတ် ရှားပါးရတနာများ ဖြစ်ကြလေသော…….
(၁) တရားမျှတခြင်း (Justice)
(၂) လွတ်လပ်ခြင်း (Liberty) နဲ့
(၃) ညီမျှခြင်း (Equality) တို့ ကို ရည်ညွှန်းကြောင်းပါခင်ဗျာ…။။။
Posted: 02 Mar 2013 05:31 AM PST
Posted: 02 Mar 2013 05:01 AM PST
Genocide ဆိုသည့် စကားလုံးအား "လူမျိုးတုန်း သတ်ဖြတ်မှု၊ လူမျိုး တစ်မျိုးလုံး ကို အစုလိုက် အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်မှု"ဟု မြန်မာလို အကျယ်တ၀င့် ပြောဆို သုံးနှုန်း ရေးသားကြသည်။ လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှု ဝေါဟာရကို တိကျပြီး အသေး စိတ် အနက်အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုရာတွင် ပညာပညာရှင်များအကြား ကွဲလွဲမှုများတော့ ရှိနေသည်။ သို့သော် နိုင်ငံတကာဥပဒေ ဖွင့်ဆိုချက်အရ ၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ ညီလာခံ ပြဌာန်းချက်ပါ 'လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ်မှုအား ကာကွယ်ခြင်းနှင့် အပြစ်ပေးခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ' CPPCG ပါ အပိုဒ် (၂) နှင့် (၃) တွင်မူ တိတိကျကျ၊ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုထားသည်။
Posted: 02 Mar 2013 07:28 AM PST
"Trevino menerima bayaran USD389,724,70," tulisan portal BuzzFeed bertarikh semalam, dipetik .
"Tugas saya ialah menulis tentang pergaduhan politik di sana dan memberi pendapat saya sendiri," katanya dipetik portal berpangkalan di Manhattan, New York itu.
"Ia bukanlah sesuatu yang luar biasa bagi penulis bebas untuk dibayar dari pelbagai sumber, seperti yang dilakukan oleh Trevino," katanya lapor BuzzFeed.
"Saya penulis blog berkaitan isu Israel dan anti-semitisme. Kemudian Joshua hampiri saya dan memperkatakan tentang Anwar yang membuat komen anti-semitik dan bergabung dengan organisasi anti-Israel.
Posted: 02 Mar 2013 02:09 AM PST
Last updated at 12:57 GM
Malaysian forces have been surrounding the gang since their arrival on Sabah
least 14 people
Posted: 02 Mar 2013 04:25 AM PST
"Saya tidak berfikir begitu. Kontrak telah diberi pada 2007," kata Abdul Khalid apabila ditanya sama ada PR bertangungjawab atas insiden tersebut.
"PKNS telah menubuhkan jawatankuasa siasatan teknikal bagi mengenalpasti punca kejadian ini," katanya dalam satu kenyataan media yang dikeluarkan PKNS.
Posted: 02 Mar 2013 01:53 AM PST
Posted: 02 Mar 2013 05:12 AM PST
When we heard that some Sulu intruders came to Sabah with guns and whatever weapons, we thought this wasaminor challenge for our Defence Minister, Home Minister and of course the army.
The intrusion wasasmall one.
There were no warships and armies which we normally see on TV, whether adrenalin pumping like those in Iraq or that of some screaming war films.
Our noble hearted PM played an important role in trying to diffuse the tension inagentle way..
None of the foreign invaders were harmed.
However, we knew that ultimately,abloody battle was unavoidable.
We lost two brave commandos who were guardingapost whileafew others suffered casualties.
Latest..one of the wounded commandos succumbed to his injuries..
On the Sulu side, 12 of them died.
May Allah Bless their souls..Al Fatihah.
Who fired first is immaterial.
You have entered into our country illegally.
Our government tried to be hospitable.
Why the hell did you not go home when the dateline was over?
Our commandos had families..they are now grieving.
No doubt the government will help them but their immense sorrow will last forever.
This is peacetime..there's no world war.
Do you think our soldiers could not have fired the minute you landed?
Our defense must now be in tiptop shape more than ever.
Any more invasion whether it comprisesabig or tiny battalion, our commandos must be ready to attack swiftly..intruders must suffer the consequences!
Our armed forces are heavily relied upon to fiercely defend the sovereignty of our beloved homeland..Malaysia.
And let us not point fingers as to who is to be blamed for this daring stunt.
Our PRU 13 is just around the corner.
Please do not cause more distress to us rakyat from whichever political divide we belong to..
Let us not start killing each other just for the sake of politics..
We are going to haveatensed PRU 13..but notagory, frenzied, Friday the 13th movie..
Posted: 02 Mar 2013 12:44 AM PST
Posted: 01 Mar 2013 11:56 PM PST
THESE DOGS NEED A HOME. They were rescued by the Malaysian Independent Animal Rescue society recently from the Kuala Lumpur dog pound. Contact 0126344254
ဝန်ကြီးဦးဆန်းဆင့် အစ္စလာမ် အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်များနှင့် တွေ့ဆုံပွဲတွင် ပြောခဲ့သည့် အမှာစကား ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇၊ ၂၀၁၃ M-Media source:Irac Ansari Dept
(၄) မြန်မာ့ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ ထုံးတမ်းစဉ်လာ ရှင်သန်ပေါ်ထွန်းလာစေရန် (ဒါကျွန်တော်တို့အားလုံး ဘာသာအသီးသီးသာ ကွဲသော်လည်းပဲ "မြန်မာလူမျိုး တိုင်းရင်းသားများ"ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှုတွေ ရှင်သန်ထွန်းကားဖို့ဆိုတဲ့အချက် ဒါကိုကျွန်တော်တို့ ရည်ရွယ်တယ်။
ကျွန်တော်တို့ သာသနာရေးကတော့ အဓိက တာဝန်အရှိဆုံးပါ။ သို့သော်လည်းပဲ ကျွန်တော်တို့ သာသနာရေးကကြီးပဲ လုပ်လို့မရတာတွေ အများကြီးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းပြီး ဆောင်ရွက်ရမယ့်ဟာတွေ ရှိနေပါတယ်။ အခုန ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီး တစ်ဦးက ပြောသွားတာရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနကို မိဘလိုဖြစ်ပါတယ်တဲ့ ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန် ထမ်းဆောင်နေသောသူများသည် ပြည်သူ့ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူသည်သာ အမိအဖဖြစ်ပါတယ်။ ဒါလေး ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ ပြည်သူ့တာဝန်တွေကို ထမ်းဆောင်ဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့မှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ ခံယူပြီးသားပါ။ ဟိုတုန်းကလည်း ခံယူပါတယ်။ ဟိုတုန်းက ကျွန်တော်တို့ ဝန်ထမ်းကျင့်ဝတ်မှာရှိတယ်။ "သူ့မြေမှာနေ၊ သူ့ရေသောက်၊ သူ့အမွေးပေါက်ရမယ်"ဆိုတဲ့ ဝန်ထမ်းကျင့်ဝတ် ရှိပါတယ်။ ဒီမှာဝန်ထမ်းကထွက်တဲ့ ညွှန်မှူးဟောင်းကြီးတွေ ပါပြီးသား။ ဝန်ထမ်းရဲ့နီတိကျင့်ဝတ်ထဲမှာ ပါပြီသား။ ပြည်သူ့တာဝန်၊ အဲဒီဒေသရဲ့ တာဝန်ကိုထမ်းရမှာ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ တာဝန်ဖြစ်တဲ့ အတွက်ကြောင့် ကျေကျေပွန်ပွန် ထမ်းရွက်နိုင်ဖို့ အတွက် ပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့က အာဏာပိုင်၊ ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့က ကယ်တင်ရှင်မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့သည် ပြည်သူကပေးတဲ့တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်။ ပြည်သူတွေ ကျွန်တော်တို့ဌာနနဲ့ ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာ အခက်အခဲတွေ မဖြစ်ရအောင် ကျွန်တော်တို့ ပြင်ပါမယ်။
ဒါပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောလိုက်တာပါ။ ကျွန်တော်တို့က သက်ဆိုင်ရာကို အားပေးပြီး ကူညီပေးတာပဲရှိရမယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဝင်ရောက်ပြီး စွက်ဖက်ဆောင်ရွက်တဲ့ ကိစ္စများရှိနေရင်လည်း အချိန်မရွေး ကျွန်တော့်ကို ကိုယ်တိုင်သော်လည်းကောင်း၊ စာရေး၍သော်လည်းကောင်း ဆက်သွယ် အကြောင်းကြားပေးပါ။ ညှိနှိုင်းပေးပါ။ ဒါတွေကို ဥပဒေနဲ့အညီ ပြင်ဆင်သွားဖို့အတွက် ရည်ရွယ်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်နောက်ဆုံးပြောချင်တာကတော့ "ကျွန်တော်တို့ကို ကူညီပါ"။ ကျွန်တော်တို့ကလည်း ကနေ့ အဖွဲ့အစည်း အသီးသီးနဲ့ အများပြည်သူရဲ့ အခက်အခဲတွေကို ဥပဒေနဲ့အညီ ကူညီဖြေရှင်း ဆောင်ရွက်သွားပါမယ်။ ဥပဒေနဲ့မညီတာတော့ လုံးဝကူညီမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောပါရစေ။ ကျွန်တော်လည်း ဥပဒေနဲ့မညီတာရှိရင် ကျွန်တော်ပြင်ပါ့မယ်။ ကျွန်တော်တို့အပိုင်းကလည်း ဥပဒေနဲ့မညီတဲ့ အားနည်းချက်တွေရှိရင်လည်း အချိန်မရွေး ထောက်ပြကြပါလို့ ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ ဒီလိုထောက်ပြတဲ့ အတွက်ကိုလည်း အာဃာတတွေ၊ အမြင်မှားတဲ့ မကြည်လင်တဲ့ဟာတွေ ကျွန်တော်တို့မှာ မရှိပါဘူး။ ကျွန်တော် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ရိုးရိုးသားသားဖြစ်သလို ဘာသာရေးအသင်းအဖွဲ့များကလည်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ရိုးရိုးသားသားနဲ့ ဆက်ဆံစေချင်ပါတယ်။ ရှိခဲ့လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဥပမာပြောတာပါ။ ကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးဌာနပိုင်းကလည်း ကျွန်တော်နဲ့တကွ ဝန်ထမ်းများ ရိုးသားပွင့်လင်းစွာနဲ့ ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်သလို ဘာသာရေးဆိုင်ရာ အကြီးအကဲများကလည်း ကျွန်တော်တို့ဌာနပေါ်မှာ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ရိုးရိုးသားသား မည်သည့်ကိစ္စမဆို ဆက်ဆံပေးပါ။ ဒါဆို ကျွန်တော်တို့ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အမြင်တွေရှင်းပြီးတော့ လုပ်ရကိုင်ရတာ အဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်။
Posted: 02 Mar 2013 01:05 AM PST
Posted: 01 Mar 2013 09:56 PM PST
ပထမဆုံးပြောချင်တာက ဘယ်သူနဲ့မှ အငြင်းပွားချင်လို့ ဒီစာရေးတာ မဟုတ်ပါဘူး။ဒုတိယပြောချင်တာက တမန်တော်မြတ်ရဲ့ အတ္ထုပတ္တိကို ငယ်စဉ်ကတည်းက သိတတ်တဲ့အရွယ် လွန်လာထိ အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ကြားခဲ့ရဖူးပါတယ်။
ဒါပေမယ့် တမန်တော်မြတ်ပြောတဲ့ စကားတွေကို အလေးပေးပြီး ဟောပြောတာမျိုးတော့ မကြုံရသလောက်ပါပဲ။ ကျွန်တော့ ၀န်းကျင်မှာ ပြောတာပါ။
တမန်တော်မြတ်ရဲ့စကားတွေကို စာအုပ်တွေမှာ ရှာဖွေပြန်တော့လည်း ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှု အပိုင်းအတွက် ဟောပြောချက်တွေသာ အတွေ့ရများပါတယ်။
ကံချွန်က အရဗီလို မဖတ်နိုင်လို့ မြန်မာလို ပြန်ဆိုထားတာတွေကို လိုက်ရှာ ဖတ်တာပါ။ ကံချွန်စိတ်ဝင်စားတာက လူမှုရေးနဲ့ ပတ်သက်တာတွေကပါ။
အဲဒီလို လူမှုရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အဆိုအမိန့်တွေကိုတော့ အလ်ဟာဂ်ျ ယူစွဖ် ခင်မောင်သက်(မန္တလေး)နဲ့ ဆရာ ၀ါးခယ်မ မောင်မင်းနိုင်တို့ရဲ့
ကျေးဇူးကြောင့် အတော်များများ သိခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ တကယ်တော့ ကံချွန် သိတယ်ဆိုတာ အများကြီး မဟုတ်ပါဘူး။ နည်းနည်းလေးပါ။
ဝေနေယျခပ်သိမ်းသည် အလ္လာဟ်၏ အိမ်ထောင်စုဝင်များသာဖြစ်သည်။
ဝေနေယျခပ်သိမ်းအပေါ်အကျိုးပြုဆုံးသူကို အလ္လာဟ်က အချစ်ဆုံးဖြစ်အံ့။
ရှုပ်ထွေးတဲ့ စကားလုံးတစ်လုံးမှ မပါပါဘူး။
လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ ဆင်းရဲချမ်းသာ၊ အလွှာနိမ့်မြင့်မရွေး အတွက် စေတနာထားပြီး အကျိုးပြုတဲ့ လုပ်ငန်းတွေ
မင်းဘယ်လောက်လုပ်ပြီးပြီလဲလို့ ကျွန်တော့ကိုယ် ကျွန်တော် မေးကြည့်ပါတယ်။
အလွန်မွန်မြတ်ကြီးကျယ်တဲ့ အများအတွက် အလုပ်ကို တတ်နိုင်သလောက် လုပ်နိုင်သလောက်
လုပ်ခွင့်ကြုံတိုင်းလုပ်ခြင်းဟာ တမန်တော်မြတ်ရဲ့ စကားနားထောင်ခြင်းပဲပေါ့။
ဆင်ခြင်တုံတရားထက်ပိုပြီး ကောင်းမွန်ရာဟူ၍ ဘာကိုမျှ ဖန်ဆင်းခဲ့ခြင်းမရှိ။
ကျွန်တော်တို့အတွက် အကောင်းဆုံးပါလို့ အသိပေးထားတဲ့ ဆင်ခြင်တုံတရားကိုရော
ကျွန်တော် တို့ ဘယ်လောက်များ အလေးထား လက်ခံကျင့်သုံးကြပါသလဲ။
အလုပ်တစ်ခုခုလုပ်တော့မယ်ဆိုတာနဲ့ လုပ်သင့် မလုပ်သင့်၊ မှားသလား မှန်သလား၊
စဉ်းစား ဝေဖန်ပိုင်းခြားမှု လုပ်ကြပါသလား။
လူသားကို ကူညီတာ၊ အလ္လာဟ်ကို ကူညီတာ ဖြစ်တယ်။
ကျွန်တော် HIVပိုးရှိနေတဲ့ AIDSရောဂါ ရထားတဲ့ လူတွေကို ကျွန်တော်နဲ့ စကားပြောစဉ် ခဏပဲဖြစ်ဖြစ်
သူတို့ခံစားနေရတဲ့ စိတ်မချမ်းသာမှုကို မေ့နေအောင် ဟာသတွေပြောဖူးတယ်။
ခြေတု၊ လက်တုတပ် ရမယ့် ချိုင်းထောက်လို ဘီးတပ်ထိုင်ခံလို ရှိနေမှ ရွေ့လျားနိုင်တဲ့
မသန်စွမ်းတွေကို စိတ်ဓာတ်မြင့်တင်ပေးတဲ့ ဟောပြောပွဲလုပ်ဖူးတယ်။
ဆွံ့အနားမကြားကလေးတွေကို (သူတို့ရဲ့ ဆရာမက စကားပြန်လုပ်ပြီး) ဟော ပြောဖူးတယ်။
ကျွန်တော်ဟောပြောတာက တစ်နာရီ၊ နှစ်နာရီ ဆိုသလိုပါ။
သူတို့အတွက် နှစ်နဲ့ချီပြီး ပြုစုစောင့်ရှောက်ကူညီနေသူတွေရဲ့
စိတ်ဓာတ်ဟာ ဘယ်လောက်လေး စားဖို့ကောင်းသလဲ။
တကယ်တော့ ကျွန်တော်တို့ကို ခိုင်းထားတဲ့ အလုပ်ပါ။
တကယ်လုပ်နေတာက အခြား ဘာသာဝင်တွေ။
ဒါကို ရိုးရိုးမြင်ပြီး အမှန်အတိုင်း လက်ခံဖို့လိုပါတယ်။ ကျွန်တော်ရဲ့ ကိုယ်တွေ့ပါ။
သည်းခံတရား မပြသူသည် ယုံကြည်ချက်မရှိပြီ။
သည်းခံနိုင်တာကိုက ကျွန်တော်တို့ဟာ တမန်တော် ရဲ့ဆန္ဒ၊ အဆုံးအမကို လိုက်နာခြင်း မဟုတ်လား။
အလ္လာဟ်အရှင်မြတ် အမုန်းဆုံးသူသည် ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားသူဖြစ်၏။
ဒေါသကို ချုပ်တီးနိုင်မှ သည်းခံခြင်းကို ကျင့်သုံးနိုင်မှာပါ။
ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခြင်းဆိုတာ ဒေါသအပေါ်မှာ အခြေခံတာပဲ။ စဉ်းစားကြပါ။
မုသားပြောရင် ငါ့နောက်လိုက် မဟုတ်ဘူး။
ကိုယ့်နှုတ်က ထွက်တဲ့စကားကြောင့် တမန်တော်နဲ့ ဝေးသွား နိုင်တာ သေချာနေပြီ။
စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ မိသားစုရေးစတဲ့ စတဲ့ အရေးတွေမှာ ရိုးရိုးသားသားနဲ့ အမှန်အတိုင်းပြောဖို့လိုနေပါပြီ။
မုသားတွေပြောတယ်၊ မပြောဘူးဆို တာ ကိုယ့်ကိုယ်တိုင် အသိဆုံးပါ။
ပြောမိရင်တော့ အမှားဝန်ခံပြီး နောက်ထပ် မပြောကြပါနဲ့တော့။
မိမိပတ်ဝန်းကျင်ကို ဒုက္ခပေးသူသည် စစ်မှန်သော မွတ်စ်လင်မ်မဖြစ်နိုင်။
ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဒုက္ခပေးတယ်ဆိုတာ တုတ်ဆွဲ၊ဓားဆွဲရမ်းကားနေမှ မဟုတ်ပါဘူး။
ဘေးအိမ်က ကလေးတွေ စာမေးပွဲနီးလို့ စာကျက်နေတုန်းမှာ ကိုယ့်အိမ်က
ကတ်စက် အကျယ်ကြီးဖွင့်ရင် ဒါအသံနဲ့ ဒုက္ခပေးတာပဲ။ သီချင်းဖွင့်မှ မဟုတ်ပါဘူး။
တရားခွေဖွင့်ဦးတော့ ဘေးအိမ်က ဘာသာကွဲဖြစ်နေရင် အသံကို တတ်နိုင်သမျှ လျှော့ထားရမှာပေါ့။
အနံ့စူးစူးဝါးဝါးပြင်းပြင်းထန်ထန်တွေကို ကိုယ့်ကြောင့် မထွက်စေသင့်ပါဘူး။
ညှော်ကြော်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ အမှိုက်မီးရှို့တာပဲဖြစ်ဖြစ်။အသံကြောင့်၊ အနံ့ကြောင့်
ပတ်ဝန်းကျင်ဒုက္ခမပေးမိအောင် ထိန်းသိမ်းနည်းမျိုး၊ အမြင်အာရုံအရလည်း ဒုက္ခမပေးမိအောင် ဆင်ခြင်ရပါမယ်။
အကြားအာရုံ၊ အမြင်အာရုံ၊ အနံ့အာရုံတွေဟာ ပတ်ဝန်းကျင်ကို အများဆုံးဒုက္ခပေးမိနိုင်တဲ့အရာတွေပါ။
အသံချဲ့စက်အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် အလွန် သတိထားသင့်ပါတယ်။
မသက်ဆိုင်သူတွေအတွက် အများဆုံး အနှောင့်အယှက်ဖြစ်နိုင်လို့ပါ။
အိမ်နီးနားချင်းတွေကို စိတ်မချမ်းသာအောင် စိတ်ဒုက္ခရောက်အောင် လုပ်နေရင် ဂျန္နသ်ဝင်ရမယ် မဟုတ်ဘူး။
ကိုယ့်အိမ်ရှေ့ကိုယ်လှဲတာဆိုပြီး ဖုံတထောင်းထောင်းထအောင် တံမြက်စီးလှဲလို့
ဘေးနားက ဖွင့်ထားတဲ့ အသုတ်စုံဆိုင် ဒုက္ခရောက်ရတာမျိုး၊
ကိုယ့်အိမ်ကထွက်တဲ့အမှိုက် ကျွတ်ကျွတ်အိတ်နဲ့ ထုတ်ပြီး သူများအိမ်ရှေ့ပစ်တာမျိုး၊
ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ဂျန္နသ်ကို မျှော်လင့်လို့ရပါဦးမလဲ။
သန့်ရှင်းစွာ နေထိုင်တာ အီမာန်ရဲ့ တစ်ဝက်
တကယ်ပဲ သန့်ရှင်းစွာ နေထိုင်ရဲ့လား။
ကိုယ့်အိမ်ထဲ ညစ်ပတ်ရတာ အားမရလို့ မီးဖိုချောင်က ထွက်တဲ့ ကြက်သွန်ခွံ၊ ဘဲဥခွံ၊ ဆန်ဆေးရေ
စတာတွေကို အများသွားတဲ့ လမ်းပေါ် ပက်တာမျိုး။
ကိုယ့်အိမ် မွေးထားတဲ့ နွား လမ်းပေါ်တက်ချီထားလို့ အများသွားတဲ့လမ်း ညစ်ပတ်နေတာမျိုး
စာဖတ်သူကိုယ်တိုင် တွေ့ဖူး ကြုံဖူးမှာပါ။
အိမ်တိုင်းကသာ ကိုယ့်အိမ်ရှေ့ သန့်ရှင်းအောင် လုပ်ပါ။
မသန့်ရှင်းရင် တမန်တော်မြတ်ရဲ့ စကားမလိုက်နာတာပဲ။
-ဇွဲ၊ လုံ့လ၊ ၀ီရိယရှိခြင်း၏ ရလဒ်သည် ဘ၀ရပ်တည်မှု၏ ထက်ဝက်ကို ပြီးမြောက်စေရာ၏။
အာဖရိကမှာ မနက်လင်းလို့ နိုးထလာတာနဲ့ 'ဒရယ်ဟာ ခြင်္သေ့ တစ်ကောင်ထက်
မြန်အောင် ပြေးနိုင်ဖို့ လေ့ကျင့်ရပါသတဲ့။ ကြိုးစားရပါသတဲ့။
အဲသလိုပါပဲ။ အာဖရိကမှာ မနက်လင်းလို့ နိုးထလာတဲ့ ခြင်္သေ့ဟာ ဒရယ်တစ်ကောင်ထက်
ဒါမှ သူဟာ ဒရယ်ကို ဖမ်းစားနိုင်မှာဖြစ်ပြီး အသက်ရှင်ရပ်တည်နိုင်မှာပါ။
-ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ဟာ ဒရယ်နေရာမှာပဲ ရှိရှိ၊ ခြင်္သေ့နေရာမှာပဲ ရှိရှိ မကြိုးစားချင်လို့ မရပါဘူး။
မကြိုးစားရင် အသက်ရှင် ရပ်တည်နိုင်ဖို့အတွက် မရေရာပါဘူး။
တမန်တော်မြတ်ကို နှစ်ဘ၀သခင်ကျေးဇူးရှင်ဆိုပြီး အလေးအမြတ်ပြုထားတာကို မေ့လို့မရပါဘူး။
အသက်ရှင်နေစဉ် လောကကြီးမှာ ခဏနေရတုန်းအတွက်လည်း နေထိုင်၊ လိုက်နာ၊ ကျင့်ကြံရမယ့်
လူမှုရေး ကျင့်ဝတ်တွေ လိုလေသေးမရှိအောင် ပြောထားခဲ့ပါတယ်။
လက်ရှိဘ၀အတွက် တမန်တော်ပြောကြားခဲ့တဲ့ အဆိုအမိန့်တွေ အများကြီးပါ။
မသိသင့်ဘူးလား။ မလိုက်နာသင့်ဘူးလား။ (သိရမယ်၊ လိုက်နာရမယ်။)
ခု ကျွန်တော် တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့တာ စကားဆယ်ခွန်းတည်းပဲရှိပါသေးတယ်။
ကျွန်တော့ ခံယူချက်က အခွန်းတစ်ထောင်သိပြီး သုံးခွန်းပြည့်အောင်မှ တိတိကျကျ မလိုက်နာသူထက်က
ဆယ်ခွန်းသာသိပေမယ့် ငါးခွန်းပဲ လိုက်နိုင်ဦးတော့ အခွန်းတစ်ထောင်သိသူထက်သာတယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
ပြောရမယ်၊ဆွေးနွေး ရမယ်ဆိုရင်တော့ ပြောစရာတွေ ဆွေးနွေးစရာတွေ အများကြီးပါပဲ။
ဒါပေမယ့် ဒီဆယ်ခွန်းလောက်ကိုပဲ ကျွန်တော်တို့ တိတိကျကျ ကြိုးစားလိုက်နာကျင့်သုံးကြရအောင်။
(၁၄၈၅ – တမန်တော်နေ့အထိမ်းအမှတ်မဂဇင်းမှ)
FB of U Tin Mg Than
Posted: 01 Mar 2013 08:40 PM PST
တနေ့ဝီရသူတယောက်အားရုံဆွမ်းကိုမဟားတရားစားလိုက်သဖြင့်ကယ်နေသောဗိုက်လေး ကိုလျှော့ရန်ဖင်လေးကောက်ရင်လေးမောက်ပြီးတောင် မြောက်လမ်းလျှောက်နေစဉ် ကျာင်းပေါ်သို့တအားပြေးတက်လာတဲ့သူရဲ့သတင်းပေးဒကာတယောက်ကိုတွေ လိုက်တော့ ဟဲ့ဒကာအလောတကြီးဘာဖြစ်လာတာတုံးဟအမောတကြီးကွယ် ဆိပြီးပြောတာပေါ့်
ထိုအခါတကာလေးကအရေးကြီးတဲ့သတင်းကြားခဲ့လို့ပါဖုရာလို့လဲပြောလိုက်ရော ဝီရသူတယောက်ဘာမြန်လဲဟုသိချင်ဇောကြီးကာ အမြန်လျှောက်စမ်းတကာလို့မိန့်တော့
မနေ့ညကမအူပင်မှာတောင်သူတွေရိုက်နှက်ခံရပါတယ်ဘုရားဟုလျောက်တင်လိုက်တာနဲ့ ဝီရသူမှာတန်းပြီး မအူပင်ကကုလားတွေလက်ချက်မှလား အဖွဲများလား ကုလားစစ်သားတွေလား လက်နက်တွေရောပါလား အစုံပြောပါလေရော်
ထိုအချိန်မှာသတင်းပေတဲ့ဒကာကမဟုတ်ပါဘူးဘုရားစစ်တက်နဲ့ပရိပက္ခဖြစ်တာလို့ကြားမိတာပါဖုရားလို့လဲလျှောက်လိုက်ကော် ဝီရသူခင်ဗျာမျက်နှာလေးရှုံမဲ့ကာ အော်အဲ့လိုပါပဲအာဏာပိုင်နဲ့ပြည်သူဆိုတာလျှာနဲ့သွားလိုပါပဲ အထက်လွဲမှားမှုဖြစ်မှာပါပြီးရင်လည်းအေးချမ်းသွားမှာပါ လို့ပြောပြီး ကဲကဲသတင်းထူးရင်လာလျောက်အုံးနော်ဒကားလို့ပြောပြီပြန်လွှတ်လိုက်လေတယ်
နောက်၁နာရီကျော်ခန့်အကြာမှာထိုသတင်းပေးတကာမှာယခင်ကလိုပဲအလောတကြီးကျောင်းပေါ်ပြေးတက်လာပါလေရော် ထိုအခါဝီရသူက ဟဲ့ဘာဖြစ်လာရပြန်တာလဲဟုမေးစမ်းပြန်ပါလေရော် ထိုအခါသတင်းပေးတကာက
သတင်းထူးပါလာပါတယ်ဖုရားဟုပြောသောကခါ ဝီရသူ ကဘာသတင်းထူးမို့လို့အလျင်မြန်လာလျောက်တာလဲဟုတွေးပြီးသိချင်ဇောကြီးကာ အမြန်လျောက်စမ်းဒကာလို့ပြောလိုက်လေသော်
သတင်းပေးတဲ့ဒကာက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ၅ နှစ်သမီးလေးမုဒိန်းကျင့်ခံရတဲ့သတင်းကြားခဲ့လို့ပါဖုရားဟုလဲလျောက်လိုက်ကော် ဝီရသူခင်ဗျာတန်းပြီးတော့ ကုလားလက်ချက်မှလား ကုလားလုပ်သွားတာမှလား လူမဆန်တဲ့ကုလားတွေ ဒီကောင်တွေကိုအသေသက်ရမယ် ဟုကျိန်းဝါးလေသော် သတင်းပေတဲ့ဒကာလေးက
မဟုတ်ရပါဘူးအရှင်ဖုရားတပည့်တော်သိတာက မုဒိန်းကျင့်သူမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဝင်တယောက်ပါဖုရားဟုလဲလျှောက်လိုက်ကော် ဝီရသူခင်ဗျာမျက်နှာလေးပျက်ကာ အော်လူသားဆိုတော့ကိလေသာ တနှာမီး ကိုမငြိမ်းနိုင်သေးတော့ မမှားသင့်တဲ့အမှားတွေမှားကုန်ကြပြီပေါ့ အင်း တရားနဲ့သာဖြေရမှာပေါ့ဟုပြောကာစိတ်ထဲမှာလဲဒီမသာဘာသတင်းတွေယူယူလာလဲမသိပါဘူး ငါလိုချင်တာကတခြားဒင်းယူလာတာကတခြားမဖြစ်သေးပါဘူး လိုချင်တဲ့သတင်းကိုတခါတည်းမှာထားအုံးမှဟုစိတ်ထဲတွေးကာ ဟဲ့တကာမင်းမှလဲအရေးမကြီးတဲ့သတင်းတွေသယ်သယ်မလာနဲ နောက်တခါကုလားသတင်းမဟုတ်ရင်လာမလျှောက်နဲ့ပါတခါတည်းမိန်လိုက်တာပေါ့
ထိုအခါသတင်းပေးတဲ့ဒကာကလဲဟုတ်ကယ့်ပါအရှင်ဘုရားဟုလျောက်ကာပြန်လာပါလေရော် ပြီနောက်အပြန်လမ်းမှာသူလဲစဉ်းစားတာပေါ့ဆရာတော်ကိုမျက်နှာလုပ်ဖို့ကုလားသတင်းဟုတ်တာရော်မဟုတ်တာရောဘယ်လိုလုပ်ကြံဖန်တီးရမှလဲဆိုပြီးစဉ်းစားကာလမ်းလျှောက်လာစဉ် ဘေးမှာဖြတ်သွားတဲ့လူ၂ ယောက် စကားကိုကြားမိပါလေရော် ဘာကိုကြားမိတာလဲဆိုရင် လမ်းထိပ်က ကုလားကြီးမုန့်ဟင်းခါးကရမ်းစားလို့ကောင်းတယ်ဗျ ကျုပ်တောင်စားချင်လွန်းလို့အစောကြီးထထသွားရတယ်လေ နောက်ကြတာနဲ့ကုန်တာပဲဗျာ လို့တယောက်နဲ့တယောက်ပြောနေတဲ့သတင်းကိုလဲကြားရော် အဲ့အချိန်မှာဒီတခါတော့ကုလားသတင်းပဲဟေ့ ငါတော့မျက်နှာရပြီဆိုပြီးကျောင်းကိုသုပ်ချီတင်ပြေးတာပေါ့ ကျောင်းပေါ်ကိုရောက်ရောက်ချင်း
ကုလားသတင်းပါဖုရား ကုလားသတင်းပါဖုရားဟုတန်လျောက်တော့တာပေါ့ ထိုအခါဝီရသူခင်ဗျာယခင်က ဒင်းပေးတဲ့သတင်းတွေကြောင့် လငမုတ်ဖမ်းနေတဲ့မျက်နှာအသွင်ကလေ လပြည့်ညလမင်းကြီးအသွင်တန်းပြောင်းသွားတာပေါ့ ဒီတခါတော့မှန်ပြီ လာထားကုလားဆိုပြီး ဟဲ့ဒကာမြန်မြန်လျောက်စမ်းပါဟယ့်ဟုသိချင်ဇောကြီးကာမေးတော့တာပေါ့ အဲ့တော့ဟိုဒကာကလဲသူကြားလာတဲ့ကုလားကြီးမုန့်ဟင်းခါးသတင်းကိုပြန်လျောက်ပါလေရော် အဲအခါမှာပဲဝီရသူဟာနားထောင်ပြီးတာနဲ့ ဒါကုလားတွေသက်သက်လူဘားဝတာ ဒီလိုကောင်းအောင်မုန့်ဟင်းခါထဲမှာဘာတွေထည့်တာမြန်းမှမသိတာ ဒါကိုငါတို့တားရမယ် ဒီကောင်ိုတွေဒီလိုနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုသူတို့လက်အောက်ရောက်အောင်သိမ်းသွင်းလိမ့်မယ် ငါ့တို့အမျိုး ဘာသာ သာသနာအတွက်စိုးရိမ်ရတယ် ဒီလိုစီးပွားရေးသေးသေးလေကနေ့ နောက်ဆုံးနိုင်ငံစီးပွားရေးအားလုံးကိုဒီကောင်တွေသိမ်းပိုက်တော့မှာဆိုပြီးမျိုးဆုံအောင်ပြောဆိုးကာသူရဲ့တပည့်သံဃာအပါး ၂၀ ကိုလက်နက်အပြည်အဆုံနဲ့တခါတည်းခေါ်သွားပြီးကုလားကြီး မုန့်ဟင်းခါးဆိုင်ကိုဖျက်ဖို့တန်ပြီသွားတော့တာပေါ့
ဟိဲုကိုလဲသူတို့ဘုန်းကြီးအဖွဲတွေရောက်ကော် မြင်တဲ့လူတွေအားလုံးကလဲဘာဖြစ်မြန်းမသိတော့ဝိုင်းအုံလာကြပါလေရော် မုန့်ဟင်းခါးဆိုင်ပိုင်ရှင်ကုလားကြီးမှာလဲလူအုပ်နဲ့ဘုန်းကြီးတွေလက်နက်တွေကိုမြင်ရှာတော့ကြောက်ရှာတာပေါ့
ဒါနဲ့ပဲဝီရသူနဲ့သူရဲ့အဖွဲတွေကဆိုင်ရှေ့ရက်ပြီး ကုလားကြီးဆိုတာမင်းလားအပြင်ထွက်ခဲ့စမ်းလို့လဲအော်ခေါ်လိုက်ရော် မုန့်ဟင်းခါးရောင်တဲ့ကုးလားကြီကကြောက်ရှာလွန်တော့အရှေ့ထွက်လာပြီးလက်အုပ်ကလေးချီကာ အရှင်ဖုရားတပည်တော်မှာဘာအပြစ်များကျူးလွန်မိလို့အခုလိုလာရောက်ကြတာပါလဲဖုရားလို့လဲလျောက်လိုက်ကော်ကုလားကြီးပြောဆိုတဲ့ပုံစံကိုပြည့်ပြီ ဝီရသူ ကနဲနဲတော့တွေဝေသွားတာပေါ့ ဟင် ကုလားလဲပြောသေးငါ့လဲလက်အုပ်ချီပြီးကတော့သေးတယ် ၏ကံနဒီကောင်အကြောက်လွန်ပြီးသူတို့ကုလားဘာသာကိုမြန်းချက်ချင်းစွန့်လွတ်လိုက်တာလား စိတ်ထဲမတင်မကြဖြစ်နေရှာတာပေါ့ ဒါနဲ့ပဲ့ ဟိတ်ကောင်ကုလားမင်းတို့အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေကဒီလိုစီးပွားရေးသေးသေးလေးကိုခြေကုပ်ယူပြီးရပ်ကွက်ထဲကလူတွေကိုမင်းတို့ဘာသာဖက်သွေးဆောင်ဖျားယောင်းတော့မယ်အကြံတွေငါ့ကိုမြန်းမသိဘူးမှတ်နေလား ငါတို့အမျိုး ဘာသာ သာသနာ ကိုစောက်ရှောက်ရမယ့်တာဝန်ငါ့မှာရှိတယ်ကွ ဒါကြောင့်မင်းကိုဆုံးမဖိုငါ့တို့လာကြတာပဲလို့ခက်တီတီနဲ့အပြီပြောတော့တာပေါ့
ဆိုင်ရှင်ကုလားကြီးမှာလဲမျက်လုံးလေးပေကလပ် ပေကလပ်နဲ့ အရှင်ဖုရားတပည့်တော်ကိုကုလားလို့မည်သူကမြန်းလျောက်တင်ခဲ့တာပါလဲဖုရား တပည့်တော်ဟာဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးစစ်ကြီးပါဖုရားဆိုပြီးကြောက်ကြောက်နဲ့ပြန်လျောက်တင်ရတာပေါ့
အဲ့တော့ဝီရသူမှာဒီကုလားကြောက်လို့လိမ်နေပြီငါသတင်းအမှန်ရထားလို့ဒီကောင်ကြောက်နေတာပဲဖြစ်ရမယ်လို့စိတ်ထဲတွေးပြီ မင်းမလိမ်နဲ့ မင်းအသားရေကလဲမဲချောက်နေတာပဲ နာမည်ကလဲကုလားကြီး ဒါကိုမင်းက ကုလားမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးလိမ်ချင်သေးတာပေါ့ဟုတ်လား ဟားဟားဟား ဆိုရယ်ပြီးပြောတော့တာပေါ့
အဲ့အချိန်မှာမုန့်ဟင်းခါသည်ကုလားကြီးခင်မျာမှလဲကြောက်ကြောက်နဲ့မဟုတ်ကြောင်းရှင်းပြရတာပေါ့ အရှင်ဖုရားတပည်တော်မွေးကတဲ့ကအသားမဲပြီးမိဘကငယ်ငယ်ကတဲ့ကအစဉ်မပြေရှာတော့တပည့်တော်မှာ အစာအဟာရချို့တဲ့ခဲ့ရလို့အခုလိုပိန်ပြီးမဲနေတာကိုအစွဲပြုပြီးကုလားကြီးလို့ခေါ်ဆိုရကြောင်းအစုံအလင်ကိုကုလားကြီကရော်ရပ်ကွက်ထဲကလူကြီးတွေကရော်ဟုတ်မှန်ကြောင်းထောက်ခံရှင်းပြရတော့တာပေါ့
အကြောင်းအရာအစုံအလင်ကိုလဲသိလိုက်ရော်ဝီရသူခင်မျာ ဘာလုပ်လိုဘာကိုင်ရမြန်းမသိဖြစ်သွားရှာပြီ့ ရှက်ကလဲရှက် လူတွေကလဲသူကိုလူသတ်ချင်တဲ့စိတ်တွေပြည့်နေတဲ့အကြမ်းဖက်သမားအကြမ်းဖက်ဘုန်းကြီးဆိုပြီအကြည့်တွေကသူအပေါ်ကိုလဲကြည့်နေကြပါလေရော်
ဒါနဲ့ပဲရှက်ရှက်နဲ့ ဟဲ့ဒီမှာငါလာခဲ့တာရန်လိုချင်လို့မဟုတ်ဘူး အခုလိုကုလားဆိုင်ဖွင့်ထားတာကို ဘာသာမခွဲခြားပဲအားပေးနေတာဆိုတဲ့သတင်းကိုကြမိလို့လာပြီးကြည့်တာဟေ့ တနိုင်ငံသားချင်းဘယ်လောက်ချစ်ခင်ကြလဲ ဘာသာမတူ ပေမဲ့ ဘယ်လောက်ချင်ခင်ကြောင်းမှတ်တမ်းတင်ဖို့လာခဲ့တာဟေ့ဒီရောက်မှအကျိုးအကြောင်းအမှန်ကိုသိလိုက်တာဆိုပြီး ပြောကာ ဟိုသတင်းပေတဲ့ကောင်ရဲ့ဂုတ်ကိုဆွဲကာအနားနားကပ်ပြီ သေချင်းဆိုး ကာလနာ ဘာသတင်မှသေချားမသိပဲနဲ့ငါ့စောက်ရှက်ကိုခွဲတဲ့အကောင် ကျောင်းရောက်လို့ကတော့နင်သေပြီသာမှတ်ဟုကျိမ်းမောင်ကာ သင်္ကန်းလေးမကာမကာသူတပည့်တွေနဲ့အတူတန်းပြေးပါလေရော်ပေ့ါ့
Baby တို့ရေ ByBy နော်
Source: Ze Ro's status.
Posted: 01 Mar 2013 10:38 PM PST
"Isu keselamatan negara tidak sewajarnya dipandang remeh dan diambil mudah oleh pihak kerajaan.
Rakyat perlu diberi maklumat mengenai apa yang berlaku," katanya.
"Kami diberitahu ada dana besar yang membiayai mereka dari Tawi-Tawi ke Sabah. Dari mana dana itu? Dari siapa?" katanya seperti dilapor viva.co.id hari ini.
Namun Esmail II mengatakan bahawa dia bukanlah pewaris, melainkan putera mahkota atau dalam bahasa Sulu disebut "sultan bantilan". Ismael II juga mengatakan bahawa Jamalul adalah Sultan Sulu dan penguasa Palawan dan Sabah sejak waktu itu.
"Sejauh yang keluarga kami ketahui, Jamalul adalah pewaris Sultan," kata Esmail.
"Inilah persoalan yang pertama kali muncul, siapa yang seharusnya mewakili Kesultanan Sulu?" kata Aquino.
Kerajaan Filipina juga sedang mengkaji dua dokumen mengenai sewa Sabah oleh Kesultanan Sulu kepada syarikat British North Borneo Co. tahun 1878 yang kemudian diambil alih Malaysia tahun 1960 an. -FMT "Dia berasal dari keluarga Umno di Johor baru berhijrah ke sini," ujarnya-FMT
"Kerajaan Umno-BN tidak boleh menyalahkan rakyat dengan persepsi ini, kelemahan ketara dalam kabinet apabila Menteri Luar, Datuk Anifah Aman gagal menggunakan saluran diplomatik menyelesaikan isu ini sehingga mengancam keselamatan rakyat Sabah.
"Dan rakyat berhak menyatakan tindakan serangan ini sebagai sesuatu yang dirancang ditengah-tengah kehangatan manifesto Pakatan Rakyat dan kepulangan penyiasat persendirian Bala yang mahu mendedahkan siapa sebenarnya terlibat dalam pembunuhan wanita Monggolia Altantuya Shariibu," kata Iskandar.
"Kini rakyat cemas, saya dimaklumkan pada ketika ini beberapa sekatan polis berlaku di daerah Papar terhadap penduduk yang ada pertalian darah tadi. Perkara ini tidak baik untuk negara.
"Saya sanjung tinggi usaha polis menjaga keamanan, tetapi saya tidak dapat lari daripada berasa simpati dan bersedih dengan kematian yang berlaku. Dan saya ingin tegaskan sekali lagi Kerajaan Pusat terutama Menteri Dalam Negeri perlu bertanggungjawab terhadap insiden berkenaan," katanya.
Posted: 01 Mar 2013 07:43 PM PST
U Thein Sein are you still alive?
Or your master Than Shwe ordered you to keep quiet?
Or are you castrated ?
If too scared to control these ATROCITIES and CRIMES just resign!
မတ်လ ၁၊ ၂၀၁၃ M-Media ဇာဏီ
Myanmar Muslim.Net ရန်ကုန် ။ ။ ၂၈.၂.၂၀၁၂ ရက်ညပိုင်းတွင် ရန်ကုန်မြို့ လှိုင်သာယာ၊ ၃-ထိပ်ရှိ မွတ်စလင်မ်များပိုင်သော ဆိုင်များနှင့် ဘာသာရေးဝတ်ပြုဆောင်ကို အကြမ်းဖက် ဖျက်ဆီးကြကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
လှိုင်သာယာ မြို့နယ် အတွင်း ဘာသာရေးအစွန်းရောက် အကြမ်းဖက်သမားများ ဖျက်ဆီးခဲ့သည့် စာရင်း
အထူးသတင်း — ၀၂ မတ်လ ၂၀၁၃
၁-၃-၂၀၁၃ နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ဘာသာရေးအစွန်းရောက်များကြောင့် လှိုင်သာယာ မြို့နယ် အတွင်း ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရသည့် ယာယီဝတ်ပြုဆောင်နှင့် အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်များ ပိုင်
နိုအာရှား (ရွေမိသားစုဆိုင်ကယ်ပြင်ဆိုင် (တပင်ရွေထီးလမ်း)
ဒေါ်လှမြစိန် (အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းအရောင်းဆိုင် ရွေဥဒေါင်းလမ်း)
အယွတ်ဘိုင်(ကျော် စက်ဘီးပစ္စည်းနှင့် အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေး ရွေဥဒေါင်းလမ်းထိပ်)
ပာာဂျီအာလမ်(လှသစ္စာဆေးဆိုင်)ရွေဥဒေါင်းလမ်း တစ်ဆိုင် ၊တပင်ရွေထီးလမ်း တစ်ဆိုင်)
ဒေါ်သေးသေး (၁၁ ကွေ့ထိပ်)
မောင်မောင်စိုး(အလက ၅ ကျောင်းရှေ့)
လူနေအိမ် ၂ အိမ်
ပာာနစ်ဘိုင် နှင့် ဒေါ်ပိုးလေး
ယင်းအကြောင်းအရာအား အသေးစိတ် စုံစမ်းရာ "လှိုင်သာယာ အောင်ဇေယျ တံတားအဆင်း၊ ၃-ထိပ်၊ ၁/၁၀-၁၁-၁၂ ရပ်ကွက်အတွင်းသို့ ယမန်နေ့ည ၁၂-နာရီလောက်တွင် ဘုန်းကြီး(၃၀၀) ၀န်းကျင်၊ အရပ်သား(၄၀၀)ကျော်မှ အကြမ်းဖက် ဖျက်ဆီးခဲ့ကြကြောင်း၊ ကန်သာယာလမ်းရှိ ဘာသာရေး ၀တ်ပြုဆောင်အတွင်း ကျူးကျော် ၀င်ရောက်ပြီး ၀တ်ပြုဆောင်အတွင်းရှိ ပစ္စည်းများအားလုံးကို ဖျက်ဆီးသွားကြောင်း၊ ကနောင်လမ်းရှိ တို့ညီနောင် စက်ဘီးပစ္စည်းဆိုင်၊ ရွှေ ဆိုင်ကယ်ပစ္စည်းဆိုင်၊ ဘိုင်လေးကွမ်းယာဆိုင်၊ ရွှေဥဒေါင်းလမ်းရှိ ကျော် အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းဆိုင်၊ လှသစ္စာဆေးဆိုင်၊ ရွှေ အလှကုန်နှင့် အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းဆိုင်ရှိ တံခါးတို့ကို ရဲတင်းနှင့်ခုတ်ပြီး ဖျက်ဆီးကြကြောင်း၊ ဂျွန်ဘူးကွမ်းယာဆိုင်၊ ၁၁-ကွေ့ရှိ ဘဂျမ်း ကွမ်းယာဆိုင်၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်းရှိ ကိုသန်းဇော် ကွမ်းယာဆိုင်၊ ဒေါ်ခတီဂျာကွမ်းယာဆိုင်၊ အာခီမာကွမ်းယာဆိုင် တို့ကိုလည်း ဖျက်ဆီးခဲ့ကြကြောင်း၊ တပင်ရွှေထီးလမ်းမရှိ လှသစ္စာဆေးဆိုင်ကိုလည်း ခဲများနှင့် ထုပေါက်ဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယခုကဲ့သို့ လှိုင်သာယာတွင် အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်များ ပြုလုပ်ခံရမှုအား ဆက်သွယ် စုံစမ်းမေးမြန်းရာ "လွန်ခဲ့တဲ့ ၁-လ၀န်းကျင်လောက်က ၁၆-ရပ်ကွက်မှာ တရားပွဲလုပ်တယ်။ ဦးပညာဝါရက တရားဟောတယ်။ အဲဒီ ဟောတဲ့တရားထဲမှာ 'အလှူပေး သူဋ္ဌေးဖြစ်'ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ မွတ်စလင်မ် မကောင်းကြောင်း၊ ဘာသာတရားက ယုတ်ညံ့တဲ့တဲ့ အကြောင်းတွေကို ၁-နာရီနီးပါးဟောတယ်။ အဲဒါကို တချို့က အသံဖမ်းတယ်၊ တချို့က CD ခွေထုတ်ပြီး ၁-ခွေကို ၃၀၀-နဲ့ ရောင်းတယ်။ တစ်ချို့လည်း ၂-ခွေကို ၃၀၀ နဲ့ရောင်းတယ်။ အဲဒါတွေကို ရခိုင်အဖွဲ့တစ်ခုက လုပ်နေတယ်လို့ပြောကြတယ်။ အဲဒီအခွေကို ရပ်ကွက်ထဲမှာလည်း ထပ်ပြန်တလဲလဲ ဖွင့်လေ့ရှိကြတယ်။ အောင်ဇေယျကြိုး တံတားထိပ် ၁/၁၀ ရပ်ကွက် ဦးဥတ္တမလမ်းမှာ ဖိုးလေးဆိုတဲ့ မွတ်စလင်မ် လင်မယားနေတဲ့ အိမ်ရှေ့မှာ ထပ်ပြန်တလဲလဲလာဖွင့်တော့ သူတို့လည်း မကျေမနပ်ဖြစ်ပြီး မျက်နှာမသာမယာဖြစ်လာတယ်။ အဲဒါနဲ့သူတို့က ရဲစခန်းကို သွားတိုင်တယ်။ သူတို့လင်မယားက ငွေကြေးလည်းချောင်လည်တော့ သူတို့ကို အစာမကြေဖြစ်ပြီး မကျေနပ်တဲ့သူတချို့လည်းရှိတယ်။ သူတို့နဲ့အဆင်မပြေတဲ့ အမျိုးသမီး တစ်ယောက်က အထောက်အထားမဲ့လုပ်ကြံပြီး ဖိုးလေးရဲ့မိန်းမက ဘုန်းကြီးတရားခွေကို ခြေထောက်နဲ့ နင်းခြေပြတယ်လို့ ဇာတ်လမ်းတစ်ခုဆင်တယ်။ အဲလို လုပ်လိုက်တော့ တစ်လမ်းလုံး အုံကြွလာတယ်။ စခန်းကို သွားတိုင်မယ်ဆိုပြီး ဆိုက္ကားနင်းတဲ့ ညီညီလွင်က ဦးဆောင်ပြီး သွားတိုင်တယ်။ အဲဒီမှာ မွတ်စလင်မ်ထဲက ဦးမြင့်သူ၊ ဦးသိန်း၊ ကိုမောင်မောင်တို့ကို ရ.ယ.က က ခေါ်တာနဲ့ သွားတွေ့ကြတော့ ဖိုးလေးတို့ လင်မယားကို ခေါ်ပြီးဆုံးမခိုင်းတယ်။ ဒါနဲ့ ဖိုးလေးတို့ လင်မယားကိုခေါ်ပြီး ဆုံးမတော့ သူတို့လင်မယားက အဲလို တရားခွေကို ထပ်တလဲလဲဖွင့်နေတာအတွက် မကျေနပ်ကြောင်းကို ၀န်ခံတယ်။ ဘုန်းကြီးတရားခွေကို ခြေထောက်နဲ့ နင်းခြေတာတော့ မဟုတ်ကြောင်းပြောတယ်။ ဖိုးလေးမိန်းမက အခွေကိုနင်းခြေတယ် ဆိုတာမြင်ကြောင်း ဗုဒ္ဓဘာသာ(၂၇)ယောက်က သက်သေခံကြတယ်။ ရဲစခန်းနဲ့ မ.ယ.က က ဖြေရှင်းပေးလို့ အဲဒီ ကိစ္စက ပြီးသွားခဲ့တယ်။
ကနောင်လမ်းက တို့ညီနောင် စက်ဘီးပစ္စည်းဆိုင်၊ ရွှေ ဆိုင်ကယ်ပစ္စည်းဆိုင်၊ ဘိုင်လေးကွမ်းယာဆိုင်တို့ကို ဖျက်တယ်။ ရွှေ ဆိုင်ကယ် ပစ္စည်းဆိုင် ပိုင်ရှင်က တစ်ခြမ်းမှာ ဆိုင်ကယ်ပစ္စည်း ဆိုင်ဖွင့်ထားပြီး တဘက်ခြမ်းကိုတော့ ငှားထားတော့ တခြမ်းက လ္ဘက်ရည် ဆိုင်ဖွင့်ထားတယ်။ အဲဒီဆိုင်က ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုင်ဖြစ်နေတော့ အဲဒီဆိုင်ကိုတော့ မဖျက်ဆီးကြဘူး။ မွတ်စလင်မ်ဆိုင်တွေပဲ ဖျက်ဆီးကြတယ်။ အဲလို ဖျက်ဆီးတာကို ခရိုင် ရဲတွေ၊ ရ.ယ.က က ရပ်ကြည့်နေတယ်။ ခဲနဲ့ထုတ်လိုက်တာ ၈-လသား မွတ်စလင်မ်ကလေးရဲ့ ခေါင်းပေါ် တည့်တည့်ကျတော့မလို ဖြစ်တော့ ကလေးအဖေက စိတ်တိုသွားပြီး 'ကလေးနဲ့ဘာဆိုင်လဲ၊ လုပ်ချင်ရင် တစ်ယောက်ချင်းလုပ်ကွာ'ဆိုပြီး ပြောတယ်။ အကြမ်းဖက်သမားတွေက 'ဟေ့ကောင်ထွက်လာစမ်း သတ်ပစ်မယ်'ဆိုပြီးအော်တယ်။ ကလေးအမေက သူ့အမျိုးသားကို နောက်ဘက်ကို ဆွဲခေါ်သွားတယ်။
အခုညကိုလည်း ကုလားသတ်ပွဲဆိုပြီး သတင်းလွှင့်တယ်။ ရ.ယ.က ကလည်း ရပ်ကွက်ထဲက မွတ်စလင်မ်တွေကို တခြားမှာ သွားနေဖို့ပြောပြီး ဖယ်ခိုင်းတယ်။ ဒါကြောင့် အိမ်တွေကို သော့ခပ်ပြီး နီးစပ်ရာဆွေမျိုးတွေဆီကို သွားနေရတယ်"လို့ လှိုင်သာယာမှ နေအိမ်စွန့်ခွာထွက်လာခဲ့သူတစ်ဦးမှ ပြောပြလာပါတယ်။